Mpanamboatra atleta, mpamatsy - Fividianana atleta Shina
Famantarana farany marika farany an'ny marika farany natao ho an'ny lehilahy
Ny lohalaharana malalaka sy ny fofona avo dia miaraka amin'ny flyKnit teknika manome sidina mora kokoa. Ny fanakatonana dantelina dia mirehitra amin'ny tendrony boribory. Ny fehin-kiraro sy ny lela bootie dia manome fampiononana manodidina ny ombelahin-tongony. Kitapo fisintonana mora hita ao anaty ny vozona. Insole azo esorina. Manohitra ny fanamafisana ny midsole cushioning ary mamerina ny angovo isaky ny dingana amin'ny fampiasana fitaovana kely kokoa ho an'ny fiakanjoana mandray andraikitra sy malefaka mandritra ny fihazakazahana. Ny fikosoham-bary mitombo eo amin'ny outsole dia manome traction sy durabilit ...
Ny mpivarotra ambony indrindra any Amazon no mpivarotra kiraro fotsy kiraro fanaovana kiraro mainty ho an'ny lehilahy
Mianjera matetika amin'ny fanazaran-tena ho fanazaran-tena isan-andro sy ho fanazaran-tena amin'ny fanatanjahan-tena. Mesh sy flyknit ambony misy modely vita amin'ny fofonaina. Ny fanakatonana dantelina nentim-paharazana miaraka amin'ny andriamby voatokana mihidy dia hitazona ny tongotra rehetra ho eo mandritra ny fanazaran-tena sy ny lanja mavesatra. Lela mivalombalona sy kofehy. Fanamboarana bootie ary hisintona tabilao eo amin'ny ombelahin-tongony mba ho mora sy mora. Lavon'ny sakotra marefo sy marefo insole. Ny foida midsole dia manome fahatsapana voajanahary. Fampitaasan-tsolika miaraka amin'ny aloka ...
2020 Sell style mafana Knit ambony fashion sneakers Classic Brand kiraro fanatanjahan-tena kiraro Breathable Yeezy
Mihazakazaka aorian'ny fandroahana amin'ny fiononana amin'ny fanampian'ny kiraro fanatanjahantena ho an'ny lehilahy. Cushioning: maivana be, valiny mora azo. Fanakatonana Lace-up. Ny fehiloha malefaka sy ny lela dia manome fiononana manodidina ny ombelahin-tongony. Ny tsipika matevina dia manome fahatsapana toy ny kiraro. Insole azo esorina. Ny famonoana kobika dia manohitra ny fanerena ary mamerina ny angovo isaky ny dingana. Ny talantalana dia mitondra ny fitoniana ho toy ny hazakainao. Ny fantsom-boaly dia manintona. Fampahalalana momba ny entana momba ny entana:
Mavom-bavony kiraro fanatanjahantena malefaka ho an'ny lehilahy sy vehivavy
Hitsambikina ary alaivo ny lalana mankany amin'ny teboka lalao amin'ny kiraro sneaker mandray andraikitra. Ny fifandanjana tsara eo amin'ny fampandehanana maivana sy ny fanavaozana nefa ny outsole dia manolotra ny farany amin'ny haingo ambony maivana. Ny flyknit ambony azo aforitra dia manome kalitao sy fahatsapana milamina. Seamless lambam-baravarankely fanamboarana Boee ho an'ny tsara sy tsy manam-paharoa fampiononana. Fanakatonana Lace-up. Lotra marefo marefo. Insole vita amin'ny foza. EVA tanteraka dia miteraka maharitra sy maivana ary maivana ihany koa. Fampahalalana momba ny vokatra A ...
Ireo kiraro fanatanjahantena mora vidy miharo kiraro mahazatra amin'ny kiraro fanatanjahan-tena mahazatra
Ho an'ny fampisehoana maivana, izay tsy manao sorona ny faharetana ilainao amin'ny fanazaran-tena sy ny fifaninanana. Ireo sneakers Knit dia mamorona ambony mateza avo izay mitazona fampisehoana maivana ary mahatsiaro tena. Fanakatonana Lace-up. Sockliner tekstil marefo. Insole vita amin'ny foza. Ny midsole polyurethane feno dia manome famerenam-pananana ihany koa ho an'ny famonoan-tena mamaly. Ny kiraro outsole dia manolotra ny farany amin'ny hainganana ambony. Fampahalalana momba ny vokatra Article No. .: 5027 Anaran'ny vokatra: ...
2020 kiraro fanatanjahantena lehilahy vaovao, sneakers ho an'ny kiraro fanatanjahantena lehilahy
Soraty indray ny lova navelanao eny an-dalana na amin'ny isan'andro manao ny kiraro mihazakazaka vaovao. Mpanatontosa: fanehoan-kevitra amin'ny angano. Karazana fanohanana: tsy miandany. Cushioning: maivana be, valiny mora azo. Ambony: Road. Ny lohalaharana malalaka kokoa sy ny masony lava kokoa dia manome fitsangatsanganana iray azo antoka kokoa Maivana mahery vaika sy hafanana ambony. Fanakatonana Lace-up. Ny fehin-kibo sy ny lela dia manome fampiononana manodidina ny ombelahin-tongony. Kitapo fisintonana mora hita ao anaty ny vozona. Insole azo esorina. Ny maizina phylon irery. Fampahalalana momba ny vokatra Article No. .: 5028 Pr ...